के तपाईमा कान दुख्ने समस्या छ , यदि छ भने अपनाउनुहोस यी घरेलु उपाए ! - Sutra TV Sutra TV
के तपाईमा कान दुख्ने समस्या छ , यदि छ भने अपनाउनुहोस यी घरेलु उपाए !
काम हाम्रो शरीरको महत्वोपूर्ण अङ्ग हो । कामको दुखाई यस्तो देखाई हो जसले मान्छेलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि लैजान सक्छ । भने कान कति बेला दुख्न सक्छ कसैलाई थाहा हुन्न । विभिन्न रोग तथा संक्रमणले गर्दा कान एक्कासी दुख्न सुरु हुन्छ । यसको दुखाइ कुनै बेला यति सघन हुन्छ कि बिरामीलाई सहन साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ । चिकित्सकसम्म पुग्दा सम्ममा कान दुखाइले निकै ठुलो पिडा दिने गर्छ ।
कानको दुखाई आम समस्या हो । खासगरी हवाई तथा सडक यात्राको क्रममा धेरैको कान दुख्छ । स-सना बच्चा पनि कानको दुखाईबाट पीडित हुन्छन् । कानको दुखाइमा घरैमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ । यसले कम्तिमा राहत भए पनि दिन्छ ।
कान किन दुख्छ ?
– कानमा मैला जम्मा भयो भने
– कानभित्र पानी पर्‍यो भने
– कानमा किरा पस्यो भने
– कानमा इन्फेक्सन वा कुनै एलर्जी भयो भने
कानको रोगको लक्षण
– कान चिलाउनु
– कानमा भारीपन महसुश हुनु
कानको संक्रमणबाट बच्न के छ घरेलु उपचार ?
– तुलसीको पात पिसेर त्यसको केहि थोपा कानमा हाल्नुपर्छ । तुलसीको रस दिनमा दुईदेखि तीन पटकसम्म गर्नुपर्छ, कानको इन्फेक्सन कम हुन्छ ।
– मेथीको दाना तेलमा हाल्ने र तताउने । जब यो सेलाउँछ, त्यसपछि छानेर प्रयोग गर्दा कानको दुखाई कम हुन्छ ।
– लसुनमा एन्टिवायोटिक एवं एन्टीसेप्टिक गुण हुन्छ, जसले इन्फेक्सन र दुखाई कम गर्छ । सस्र्युको तेलमा लसुन मिसाएर तताउने । त्यसलाई चिसो भएपछि छानेर केहि थोपा कानमा हाल्नुपर्छ । लसुनको रस कानमा हाल्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
– नीमको पातको रस केहि थोपा कानमा हाल्नुहोस्, कुनैपनि इन्फेक्सनमा उपयोगी हुन्छ ।
– जैतुनको तेल कानको दुखाईमा रामबाणको काम गर्छ ।
– कानको दुखाई कम गर्न प्याजको प्रयोग पनि उत्तम हुन्छ ।
नोट : यदि घरेलु उपचारबाट पनि दुखाई कम नभएमा डाक्टरलाई देखाउन अति आवश्यक हुन्छ ।